प्रचारमा विपिन नहुँदा नम्रता र निश्चललाई प्रेसर !
गफगाफ - दिनेश राउतको निर्देशन रहेको सिनेमा प्रसाद मंसिर २१ गतेदेखि प्रदर्शनमा आउँदैछ । यो सिनेमामा विपिन कार्की, नम्रता श्रेष्ठ र निश्चल बस्नेत मुख्य भूमिकामा छन् । सिनेमामा विपिन र नम्रता निसन्तान दम्पतीको भूमिकामा छन् । निश्चल बस्नेतलाई सिनेमामा नकारात्मक भूमिकामा प्रस्तुत गरिएको छ । सिनेमामा आफ्नो भूमिकालाई लिएर निश्चल निकै नै उत्साहित देखिएका छन् । यतिबेला सिनेमाको प्रचार प्रसारको लागि निश्चल र नम्रता लागिपरेका छन् । किनभने अभिनेता विपिन कार्की बाईक दुर्घटनामा परेर खुट्टा फ्याक्चर भएका कारण सिनेमाको प्रचारमा हिड्न सकेका छैनन् । गत मंगलबार दुर्घटनामा परेका अभिनेता विपिन कार्की बुधबार मात्रै डिस्चार्ज भएका छन् । उनले अझ केही दिन पूर्ण रुपमा आराम गर्नुपर्नेछ ।
स्वास्थ्यस्थितीका कारण विपिन सिनेमाको प्रमोशनमा नहिड्दा निर्माण पक्षले भने प्रचारमा कमी भएको महसुस गरेको बुझिएको छ । तर सिनेमाका अन्य दुई कलाकार निश्चल र नम्रताले भने सिनेमा प्रमोशनमा कुनै पनि कसर बाँकी राखेका छैनन् । उनीहरु दुवै जनाले विपिनको स्वास्थ्यलाई मध्य नजर गर्दै सिनेमाको प्रचार गरिरहेका छन् । यहि कारण पनि दुई जनालाई मात्र प्रचारको प्रेसर बढेको देखिन्छ । अर्का तर्फ प्रसादको प्रचारमा हिड्दा यी दुईलाई एउटा प्रश्नले हैरान बनाएको छ । हामीसँग कुराकानी गर्दै निश्चलले अन्र्तवार्तामा सोधिने एउटा प्रश्नले आफू दिक्क भएको बताए ।
उनलाई प्रसादको प्रचारमा हिँडिरहँदा बच्चा कहिले पाउने ? भनेर प्रश्न आईरहेको छ । उता नम्रता अविवाहिक भएका कारण उनलाई भने विवाह कहिले भन्ने ? प्रश्नले सताएको छ । यस विषयमा उनीहरु दुवैले भने, अब त हामीलाई थाहा भईसक्यो के प्रश्न आउँछ भनेर । त्यस कारण हामी पहिले नै तयार भईसकेका हुन्छौँ त्यो प्रश्नको जवाफ दिन ।
नम्रता र निश्चलसँग गरिएको कुराकानी पनि हेर्नुहोस् ।